Qabsaa’onni mirga namaa, Sudaan seera yeroo bulchinsa Omar al-Bashir seera ture kan akka musliimota amantii isaanii jijjiirratanii du’aan adabu jedhu jijjiirruuf tarkaanfii fudhachuun biyyattiin daran mirga namaa bu’uuraaf kabajaa isheen qabdudu mul’isa jedhan.
Tarkaanfii mootummaa ce’umsaa kan yeroo ammaan fudhatame keessumaa ministeera murtii haqaa fi hojii isaanii haqaa ni galateeffanna jechuu dhaan US keessa kan maadheffate caasaa mirga namaa dhimmi Sudan irraa Adlan Ahmed Abdelaziz VOAf ibsaniiru.
Ministeerri haqaa Nasreddiin Abdulbarii kaleessa ibsa kennaniin kan waggaa darbe erga Bashiriin waraanni aangoo irraa daree booda aangoo kan qabate mootummaa ce’umsaa seerawwan hedduun heera biyyattii akka fooyyeffaman taasise jedhan.
Tokko musliimota amantii ofii dhiisan du’aan adabuu dhiisuu, ka biroon immoo namoonni musliima hin taane soda male ykn utuu hin yakkamin mana dhuunfaa ofii keessatti dhugaatii alkoolii akka dhugan eeyamuu dha. Ka biroon mootummichi seera haaraa inni baase kittannaa dubartoota irratti raawwatamu adabuu dha.
Galmeen heeraa kun marii yeroo dheeraa fi gad fagoo ta’een booda ibsame. Seerawwan jijjiiraman kun waa hedduu irratti kan fuuleffatu ta’uun illee beekamee jira.